अन्तर्वार्ता/विचारआइतवार, श्रावण ८, २०७४
नेपालमा ०.०५६ डिग्री सेल्सियसका दरले वर्षेनि तापक्रम वृद्धि भइरहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक डा. ऋषिराम शर्मा भन्छन्, “नेपालमा तापक्रम वृद्धिको दर उच्च छ ।”
नेपालमा प्रत्येक वर्ष ०.०५६ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम वृद्धि भइरहेको दाबी गर्नुभएको छ, यसको आधार के हो ?
देशका विभिन्न ठाउँमा राखिएका मौसम मापन केन्द्रबाट प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा यो तथ्य सार्वजनिक गरिएको हो । यसअघि सन् २०१२ मा वार्षिक ०.०६ डिग्री सेल्सियसका दरले तापक्रम वृद्धि भइरहेको पाइएको थियो ।
पाँच वर्षमै तापक्रम वृद्धि कसरी फरक देखियो ?
त्यतिबेला सबै ठाउँको तथ्याङ्क उपलब्ध थिएन । तर, यसपटक हामीले देशका ९० ठाउँमा रहेका मौसम मापन केन्द्रको ४० वर्षदेखिको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा नयाँ तथ्य भेटियो ।
त्यसो भए तापक्रम वृद्धिको दर घटेको हो ?
पहिले सबै ठाउँको तथ्याङ्क प्राप्त भएको थिएन । हामीलाई प्राप्त तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा ०.०६ डिग्री सेल्सियस भनेका थियौं । अहिले र १० वर्षपछि पनि फरक हुनसक्छ । बरु विश्वव्यापी तुलनामा नेपालमा तापक्रम बढेको छ । सन् १८५० देखि २००० सम्म विश्वव्यापी रुपमा १.१६ डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढेको थियो भने नेपालमा गत ५० वर्षमा २.४६ डिग्री सेल्सियस तापक्रम बढेको छ ।
तापक्रम वृद्धि हुनुको प्रमुख कारण के हो ?
तापक्रम वृद्धिको प्रमुख कारण हरितगृह ग्याँसको उत्सर्जन नै हो । ती भनेका कार्वनडाइअक्साइड, नाइट्रसअक्साइड, मिथेन, क्लोरोफ्लोरो कार्बनलगायतका ग्याँस हुन् । सन् २०१५ को तथ्याङ्क अनुसार हरितगृह ग्याँस उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका ०.०२७ प्रतिशत मात्रै छ । तर, तापक्रम वृद्धिको जोखिम हामीलाई बढी छ ।
तापक्रम वृद्धिले के के असर पारिरहेको छ ?
यसको प्रत्यक्ष असर हिमाली क्षेत्रमा परेको छ । हिमालको हिउँ पग्लिने क्रम बढेको छ, हिमतालको संख्यामा वृद्धि भएको छ, हिमनदी गहिरिने र साँघुरिने क्रम बढेको छ । यसले बालीनालीको उत्पादन तथा जीवनचक्रमै असर पुर्‍याएको छ । प्राकृतिक विपत्ति निम्तिने खतरा छ ।